होलीमा कोरोनाको डर – पानीमा नभिज्न र भिडभाडमा नजान डाक्टरको अनुरोध , सबै जना सुरक्षीत रहनुहोला !::Point Nepal
होलीमा कोरोनाको डर – पानीमा नभिज्न र भिडभाडमा नजान डाक्टरको अनुरोध , सबै जना सुरक्षीत रहनुहोला !
काठमाण्डौ – कोरोना भा,इरसको जो,खिम बढेकाे भन्दै होलीमा रमाईलो गर्दा ध्यान दिन डाक्टरले सु,झाव दिएका छन् ।
पानीमा भिज्दा तथा भिडभाडमा रङ‍्ग अबिर दल्दा विशेष ध्यान दिन टेकु अ,स्पतालका प्रवक्ता एवं सरुवा रो,ग वि,शेषज्ञ डाक्टर अनुप बाँस्तोलाको सु,झाव छ ।
कोरोनाको भा,इरसको स,ङ्क्रमणबाट जो,गिन व्यक्ति आफैँ पनि सचेत हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । होली पर्वमा एक अर्कालाई अबिर र रङ्ग लगाउँदा वा पानी खेल्दा मानिस मानिसबीचको दूरी नजिक हुने हुँदा रु,घोखोकी सर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । यस्तै, हा,छ्यूँ गर्दा थुक उछिटेर अरु व्यक्तिमा पनि सर्ने ख,तरा हुने डाक्टर बाँस्तोलाले बताउनुभयो ।
डा अनुप बाँस्तोला
भि,डभाड, मानिसको बाक्लो उपस्थिति भएका ठाउँमा नजान पनि डाक्टरको सु,झाव छ । यस्तै, अहिले कोरोनाको उच्च जो,खिम रहेकाले सकेसम्म समूहमा न,हिँड्न र समूहमा नबस्न पनि डाक्टरको आ,ग्रह छ ।
स,ङ्क्रमण फै,लिनुअगावै स,तकर्ता अ,पनाउन सके कोरोनाको सं,क्रमणलाई रोक्न सक्ने भन्दै डाक्टरले होलीमा धेरै पानी नखेल्न पनि सल्लाह दिएका छन् । कोरोनाको भा,इरस चिसोमा बढी स,क्रिय हुने हुँदा शरीर भिज्ने गरी होली नखेल्न डाक्टरको सु,झाव छ । यस वर्षको हो,ली आउँदो हप्ता मनाईंदैछ ।
रो,ग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुनेहरुलाई कोरोना भा,इरसको सं,क्रमणको जो,खिम धेरै हुन्छ । यस्तै डाक्टरले रु,घाखोकी, ज्वरो लगायतका स्वा,स्थ्य स,मस्या देखिए तुरुन्त डाक्टरको निगरानीमा जान पनि आ,ग्रह गरेका छन् । उज्यालो अनलाईनबाट साभार